Jabuutii: Galaanaa Diimaa, dhiyeenya Jabuutiitti bidiruun garagaluun 52 du'an - BBC News Afaan Oromoo
Jabuutii: Galaanaa Diimaa, dhiyeenya Jabuutiitti bidiruun garagaluun 52 du'an
Image copyright IOM
Goodayyaa suuraa ''Namoonni jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha haala suukanneessaa akkanaaf saaxilamu''
Kaaba baha Jibuutii naannawa Obok jedhamutti baqattoonni gurmuu gurmuudhaan gara Yemenitti ce'uuf dabareesaanii eeggatu.
Isaan kanneen keessaa gaafa Kibxataa dooniin namoota 130 feetee Obok irraa gara Yemenitti imala eegalte dhidhimuun hanga ammaatti yoo xiqqaate, namoonni 52 yoo du'an kanneen 16 ta'an ammoo lubbuudhaan baraaramuu Dhaabbati Gargaarsa Baqattootaa IOM beeksiseera.
Balaa danbaliin galaanaa doonii garagalchuun mudateen namoota du'an keessaa reenfi dubartoota lamaa fi dhiirota sadii gaafa Kibxataa kan argame yoo ta'u 47 kan ta'an ammoo har'a argaman jedha IOM.
Dhaabbati Gargaarsa Baqattootaa IOM irraa Anjelaa Wells ''Ammaaf lammummaa namoota du'anii mirkaneeffachuu baannus, daandii kana yeroo baayyee lammiilee Itoophiyaatu itti fayyadama,'' jechuun BBCtti himteetti.
Warra lubbuun bahan 16 keessaa guutummaan guutuutti lammiilee Itoophiyaa tahuu mirkaneessineerras jedhan.
''Reeffa waahillansaaniirra tarkaanfatanii ammallee gara Yemen imalaa jiru''
Namni Jibuutii irraa dubbisne Nabiil Nuuraa ''Wiixata darbe kana ijoollee Oromoo digdama caalantu asii deeman. Wayita oduu namoota du'anii dhageenyu ijoollee santu keessa jira. Bakki namoonni itti dhuman kun Obok jedhama. Handaara galaanaati. Namoonni gara Yemen imalan asitti dabaree eeggatu,'' jedheera.
Sababa kanaan hiriyootasaa akka dhabe kan dubbatu Nabiil ammallee ijoolleen xixiqqoon, dargaggoonnii fi shamarran akkasumallee namoonni maatii qaban bakka kanatti dararamaa jiru jedha.
Rakkoo baqattoota Itoophiyaa Jibuutii fala dhabe
Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa ambaatii gadi dhiifaman
''Kanaan dura sababa siyaasaa fi hojjetatanii buluuf haalli biyya keessaa wayita qormaata isaanitti ta'u jireenyasaanii balaaf saaxilanii gara Jibuutii, darbees ammoo gara Yemenitti Godaanaa turan.
Amma ammoo erga fooyya'iinsi siyaasaa biyyattii keessatti dhufee, namootuma kanaan dura biyyoota Arabaa deemanii deebi'antu heddumminaan imalaa jiru. Kunimmoo ammallee dallaalotaan gowwoomsamuu keessaa bahuu dadhabuudha.
Namoonni kunneen akka gara biyyasaaniitti deebi'an inuma gorsina,'' jedha.
''Hanga ammaa warra Baahara eegantu reeffa hedduu guuraa jiru. Hanga reeffi hundi walitti guuramutti arguu hin dandeessan nuun jedhan. wanti nama gaddisiisu garuu ammallee ijoollee hedduutu deemuuf dabaree eeggataa jiru.
Dhiyoo tanammoo bishaan haala hamaadhaan waan danbali'aa jiruuf rakkoon caalu mudachuu mala. Namoonnii keenya utuma reeffa obboleessaa fi obboleettii isaa arguu irra darbee gara imaluu barbaadaa jiru.
Kanaafuu mootummaan keenya waan akka itti dhiyeenyaan hordofu barbaadna,'' jedha.
"Namoonni jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha haala suukanneessaa akkanaaf saaxilamu. Kun baayyee nama gaddisiisa. Mootummaan Jibuutii dhimma kanaaf furmaata barbaaduu keessatti akka nu tumsu fedhii agarsiiseera.
Nutis balaan suukanneessaan akkanaa akka isaan hin mudanneef ni hojjenna,'' jedhan Hoogganaan IOM kan Damee Jibuutii Laaliinii Veeraasaamii.
Jibuutii Yamanitti, Yamaniirraa Itoophiyaatti
Balaan kun kan mudate wayita Dhaabbati Gargaarsa Baqattootaa IOM lammiilee Itoophiyaa Yemen keessatti ugguramanii turan 350 gara biyyaa deebisuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksisettidha.
IOM buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Sana'aa irraa hanga Buufata Xiyyaaraa Booleetti baqattoota kunuunsuun gara biyyaatti akka deebisu beeksiseera.
Goodayyaa suuraa ''Ammaaf lammummaa namoota du'anii mirkaneeffachuu baannus, daandii kana yeroo baayyee lammiilee Itoophiyaatu itti fayyadama,''
"Yeroo ammaa baqattoota Yemen irraa gara Itoophiyaatti deebisuuf filannoon jiran baayyee dhiphaadha. Garuu aanga'oota biyyoota lamaanii fi hojjettoota IOM waliin qindoominaan hojjechuun baqattoonni gara biyyasaanitti akka nagaan deebi'an ni hojjenna,'' jedhan Yemenitti Hoggannan IOM David Derthick.
Hojiin baqattoota gara biyyaatti deebisuu bara 2019 keessa xiyyeeffannaa keenya kan jedhan hoogganaan kun namoota 3,000 biyyatti deebisuuf akka hojjetan beeksisaniiru.
Dura taa'aan Hawaasa Itoophiyaa magaalaa Adan Obbo Ziyaad Daawud Siraaj, bara 2018 keessa baqattoonni Oromoodhaa, Yemen irraa gara biyyaa galuuf iyyatan hedduudha. Galiinsaaf ulaagaalee guutamuu qaban irratti garuu Dhaabbata Gargaarsaa IOM waliin utuu walii hin galin turaniiru jedhan.
Baqattoonni Jibuutii jiran oduu sobaa 'tamsaasaa jiru'
Hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa nageenyarraa taraa?
''Yemen biyya goolama siyaasaa fi diinagdee keessa jirtu waan taateef baqattoonni as jiraatan dararama guddaa keessa jiraatu.
Kanneen duraan hacuuccaa siyaasaa fi diinagdee biyya Itoophiyaa dheessanii gara Yemen seenan amma fooyya'iinsa Itoophiyaa keessa jiru fayyadamuun deebi'uu barbaadu.
Garuu namoonni kunneen wayita gara biyyaa deebi'an yookiin immoo gara biyya tasgabbii qabuutti dabarfaman maaliin jiraatu? eessa jiraatu? haala kamiin geejjibsiifamu kan jedhan gaaffilee baqattootaa turan,'' jedhan.
Gaaffileen kunneen yoo deebi'an baqattoonni Yemen keessa jiraachuu barbaadan hin jiran. Garuu namootumti galuudhaaf jedhaman kunneeniyyuu ammallee ulaagaalee guutamuu qaban jedhaman irratti waliif hin galle.
Nutis akka bulchiinsa Hawaasa baqataa kanaatti baqataa rakkoo kana keessa jiru erga gargaaruu hin dandeenyee gara biyya nagaa qabuutti qubsiisaa, yookaan ammoo gara biyyasaaniitti deebisaa jennee gaafachaa turre.
Goodayyaa suuraa ''Namni dhukkubaan, qoonqoodhaan, lolaan dararamaa haga yoomiitti jiraata?''
''Namni dhukkubaan, qoonqoodhaan, lolaan dararamaa haga yoomiitti jiraata? Fakkeenyaaf baqataa Somaalee wayita gara biyyaatti deebisan mana jireenyaa ijaaraniifii, baatii jahaa hanga waggaa takkaatti gargaarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa 250 hanga 300 itti fufaa, harkattis maallaqa kennaniifii qubsiisan.
Kana waan ta'eef haala baqataa biraa itti qubsiistanitti yoo nu qubsiisatan ammaan tana gara biyyaa galla jedhee baqataan gaafataa jira.'' jedhan Obbo Ziyaad.
Baqattoonni Itoophiyaa fi Ertiraa Yamanitti gargaarsa dhabne jedhan
"Dhiigni osoo hin dhangala'iin waliigaluunis, waliigaluu dhabuunis ni danda'ama"
Dhaabbati gargaarsa baqattootaa IOM dhimma lammiilee Itoophiyaa Yemen jiraniin walqabatee kan inni hojjechaa ture, namoota dhuunfaa dhimma biizinesiifi amantaaf jecha gara Sa'uudii deemuuf karaa Yemen fayyadamaniif haala mijeessaa ture malee baqattoota waggoota 20 oliif Yemen keessa turaniif hanga ammaatti fedhiisaanii guutanii biyyatti deebisuuf wanti irratti waliigalan hin jiru.
Karaa IOM's karaa UN's walii galteen irra ga'ame takkallee hin jiru.
Kaleessuma gara Jibuutii naannawa handaaraa galaanaatti bilbileen ture. Bidiruun baqattoota gara Yemen fidaa turte dhidhimuun namoonni du'uu dhagaheera.
Naannawa Obok irraa bahanii galaanaa irra kiilomeetira fagoo irratti dooniin namoota 140 baadhattee turte garagaltee namoonni hedduun dhumaniiru.
Fulaawwan dameen IOM jiran hundatti dhumaatii lammiilee dhagahaa jiraanna waan ta'eef abdii nuuf kennaa hin jiran jechuun dubbataniiru.
Xalayaa MM Abiy Ahimad Yamaniif: "Waraana keessatti hunduu mo'amaadha"
4 Muddee 2018
29 Muddee 2017
Baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii jiran biyyatti deebi'uf oduu sobaa 'tamsaasaa jiru'
Baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii jiran hiraarsaan guddaa nurra gahe jedhan
'Namni du'ee yoo awwaalamuu fi dubartoonni gudeedaman argeera'
Nama barbaacha waggaa 10 booda reenfi isaa suuqii keessatti argame
MM UK haaraan Boris Johnson kaabinoota muuduufi
Jarmanitti lammiin Eertiraa sabummaasaatiin qoodamee ajjeeffame
Namichi qoricha sammuu hadoochu fe'ee ture harka poolisii bu'e
Morkataan buunyaa morkii irratti miidhame lubbuun dabarte
'Waldaan Maccaa Tuulamaa Gadaa Oromoo deebisuu irratti fuulleffata'
Rasaasni tasaa gaazixeessaa galaafatte
Appilikeeshiniin daa'immanii 'Facebook' mudaa godhate